Jonah copy 1
Joseph and Pharaoh's Dream copy 2
Joseph and Pharaoh's Dream copy 3
Joseph and Pharaoh's Dream copy 4
Jesus Feeds the Hungry copy 5
စပျစ်ရည်ကုန်သောအခါ မင်္ဂလာပွဲပျက်လုနီးပါးဖြစ်သော်လည်း ယေရှုသည် ရေကို စပျစ်ရည်အဖြစ်သို့ အံ့ဩဖွယ်နည်းဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယေရှုက ပွဲတစ်ခုမှာ မုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်အား ပွားများစေပြီး လူငါးထောင်ကို ကျွေးမွေးသည့်နေရာသို့ ကလေးများမြင်စေရန် စူပါစာအုပ်က ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
သင်ခန်းစာ (၁) သူစေခိုင်းသမျှကို လုပ်ဆောင်ပါ။
အဓိကအချက် - ကျွန်ုပ်သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ပြီး သူစေခိုင်းသောအရာကို လုပ်ဆောင်မည်။
ရွှေကျမ်းချက် - မယ်တော်ကလည်း၊ သူစေခိုင်းသမျှတို့ကို ပြုကြလော့ဟု အစေခံတို့အား ဆိုလေ၏။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂:၅ (JBMLE)
သင်ခန်းစာ (၂) တိုးပွားလာခြင်း
အဓိကအချက် - ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်ပေးသောအရာကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။
ရွှေကျမ်းချက် - မျိုးစေ့ကြဲသောသူအား မျိုးစေ့ကို၎င်း၊ အစာအာဟာရကို၎င်း၊ ပေးတော်မူသောသူသည်၊ သင်တို့အားမျိုးစေ့ကိုပေး၍ ပွားများစေတော်မူမည်။ သင်တို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်း ကြွယ်ဝစေတော်မူမည်။ ကောရိန္တုဩဝါဒစာဒုတိယစောင် ၉:၁၀ (JBMLE)
သင်ခန်းစာ (၃) သခင်၏ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်
အဓိကအချက် - ဘုရားသခင်၌ အစဉ်ကောင်းသောအကြံအစည်ရှိသည်။
ရွှေကျမ်းချက် - ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုချစ်သောသူသည် ငါ့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်။ ငါ့မည်းတော်သည် ထိုသူကို ချစ်တော်မူသည်။ ငါတို့သည်လည်း၊ သူဆီသို့ကြွ၍ နေရာချမည်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၂၃ (JBMLE)
Baptized copy 1
Chris dan Joy sangat bersemangat dengan baptisan yang akan mereka terima, tetapi hujan lebat mengancam mengacaukan rencana mereka. Superbook membawa mereka ke masa lalu untuk belajar tentang arti menjadi penjala manusia. Superbook juga mengajak Ellie dan membawanya dalam perjalanan bersama dengan mereka.	Chris dan Joy menyaksikan bagaimana Ellie bertemu Yesus untuk pertama kalinya dan menuntun dia untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya. Saat kembali ke masa kini, cuaca cerah, dan acara baptisan kembali diadakan, termasuk untuk Ellie!
PELAJARAN 1: Ikut Yesus!
Super Kebenaran: Aku memilih ikut Yesus.
Super Ayat: “Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada.” Yohanes 12:26a
PELAJARAN2CIPTAAN BARU
Super Kebenaran: Aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus.
Super Ayat: Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2:12
PELAJARAN3BAWA MEREKA PADA YESUS
Super Kebenaran: Yesus memanggil kita untuk membawa orang lain kepada-Nya.
Super Ayat: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.”.” Matius 28:19 :
Jesus—Friend of Sinners copy 1
Joy senang sekali mempunyai banyak teman Kristen yang baru. Tetapi ketika seorang teman lama mengundangnya ke pesta di hari yang sama dengan acara gereja, Joy bingung harus berbuat apa. Apakah boleh bergaul dengan teman-teman yang belum diselamatkan? Superbook membawa Joy, Chris, dan Gizmo untuk menyaksikan tiga kisah Alkitab: perumpamaan tentang perjamuan (pesta besar), Matius pemungut cukai yang mengikut Yesus, dan perempuan berdosa. Joy takjub melihat Yesus menyediakan waktu bersama orang berdosa, pemungut cukai, orang miskin, dan yang cacat. Dia memutuskan untuk makin serupa seperti Yesus dengan mengikuti teladan-Nya.
Paul Keeps the Faith copy 1
Hidup Joy sangat terguncang saat tiba-ibunya tiba dilarikan ke rumah sakit karena suatu penyakit yang serius. Joy mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menyembuhkan saja ibunya dan bertanya-tanya apa baiknya Alkitab jika sesuatu yang begitu mengerikan terjadi. Superbook membawa Chris, Joy, dan Gizmo ke Roma pada saat terjadi Kebakaran Besar. Anak-anak bertemu Rasul Paulus dan seorang gadis Kristen bernama Julia. Paulus menunjukkan kepada anak-anak bagaimana orang Kristen menderita karena imannya, tetapi menemukan kekuatan dan pengharapan melalui ayat Alkitab. Ketika anak-anak kembali, Joy memiliki pandangan yang baru, yang memberinya keberanian untuk membagikan kasih Kristus kepada ibunya.
The Prodigal Son copy 1
Cristi, Oana și Memo sunt îngrijorați pentru un băiat care fuge de acasă, deoarece crede că tatăl său nu-l va ierta niciodată. Pot ei să îl facă să se răzgândească? Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în Galileea antică, acolo unde Isus spune pilda fiului risipitor. Ei pot vedea cum un tânăr este în căutarea libertății și aventurii, doar pentruadescoperi că ceea ce își dorește cel mai mult în lume este dragostea tatălui său. Copiii învață că Tatăl nostru Ceresc este întotdeauna gata să ierte.
LECȚIA 1 GATA DE IERTARE
Adevăr biblic: Tatăl nostru ceresc este întotdeauna gata să ierte.
Verset: „Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.” Psalmul 86:5 (VDC)
LECȚIA 2: DUMNEZEU AȘTEAPTĂ CU RĂBDARE
Adevăr biblic: Dumnezeu așteaptă cu răbdare să ne întoarcem la El.
Verset: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” Apocalipsa 3:20 (VDC)
LECȚIA3O SĂRBĂTOARE ÎN CER
Adevăr biblic: Dumnezeu sărbătorește atunci când Îi cerem lui Isus să ne ierte păcatele.
Verset: „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.” Luca 15:7 (VDC)
Peter and Cornelius copy 1
မောင်သစ်သည် ကျောင်းနောက်တစ်ကြိမ်နောက်ကျပါက ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမယ်လို့ဆိုပေမယ့် အတန်းခေါင်းဆောင်က သူအချိန်မီ‌ရောက်မလာတဲ့အတွက် အလျင်အမြန် တိုင်ကြားလိုက်သည်။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်က ဘယ်တော့မှ သူငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး—ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်နိုင်မလား။ စူပါစာအုပ်သည်မောင်သစ်၊ ဝိုင်း နှင့် ဂစ်ဇ်မိုတို့အား အတန်းခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ—တစ် ရာစု အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ ရောမစစ်တပ်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သော တပ်မှူးကော်နေလိ နှင့်တမန်တော်ပေတရုတို့ တွေ့ဆုံကြပြီး၊ ၎င်းတို့နှစ်ဦးလုံးသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အ‌တွေးအခေါ်မတူညီဘဲ သခင်ဘုရားထံမှ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ရူပါရုံများအထိ အလွန်ကွဲပြားသော လူနှစ်ယောက်နှင့် တွေ့ဆုံကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် မျက်နှာသာပေးခြင်းမရှိဘဲ လူတိုင်းအတွက် ကယ်တင်ခြင်းပေးသည်ကို ကလေးများ သင်ယူရမည်။
သင်ခန်းစာ (၁) မျက်နှာသာပေးခြင်းမရှိသော
အဓိကအချက် - ဘုရားသခင်သည် မျက်နှာသာပေးသောဘုရားမဟုတ်ပါ
ရွှေကျမ်းချက် - ယေရှုခရစ်၌ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလသလူမရှိ၊ ကျွန်မရှိ။ လူလွတ်မရှိ၊ ယောက်ျားမရှိ၊ မိန်းမ မရှိ၊ ထို​သ​ခင်၌ သင်​တို့​အ​ပေါင်း​သည် တစ်​လုံး​တစ်​ဝ​တည်း ဖြစ်​ကြ၏။ ဂလာတိ ၃:၂၈ (JBMLE)
သင်ခန်းစာ (၂) အပြစ်မှ သန့်ရှင်းစေခြင်း
အဓိကအချက် - ‌ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှကို သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။
ရွှေကျမ်းချက် - “ကိုယ်အပြစ်တို့ကို ဖော်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏။” ၁ ယော ၁:၉ (JBMLE)
သင်ခန်းစာ (၃) လူတိုင်းအတွက် ကယ်တင်ခြင်း
အဓိကအချက် - ကယ်တင်ခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ရွှေကျမ်းချက် - “နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ကြားနာရသောသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သက်‌ရောက်တော်မူ၏။” တမန်တော် ၁၀:၄၄ခ (JBMLE )
Paul and Silas copy 2
ဝိုင်းက သူ့အာသီးတွေကို ခွဲထုတ်ရမယ့် ဆေးရုံကနေ လွတ်မြောက်ချင်နေတယ်။ ခွဲစိတ်မှုကို ရင်ဆိုင်ရဲဖို့ သူမက မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်လို တည်ဆောက်နိုင်မလဲ။ စူပါစာအုပ် က မောင်သစ်၊ ဝိုင်း နှင့် ဂစ်ဇ်မို တို့ကို ပေါလုနှင့်သိလ ‌ဗေဒင်ဆရာမထံမှ နတ်ဆိုးကိုအမိန့်ပေးနှင်ထုတ်သောသူနှင့်တွေ့ဆုံရန် ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ဘုရားသခင်ကို နာခံခြင်းကြောင့် ရိုက်နှက်ခံရပြီး ထောင်ချခံရသည့်အခါ အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်ပုံနည်းလမ်းကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ ငလျင်ကြောင့် သူတို့ကို လွတ်မြောက်စေပြီး ထောင်မှူးကိုလည်း ကယ်တင်လိုက်တဲ့ အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဟာ သက်သေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကလေးများသည် အခြေအနေတိုင်းတွင် ဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သင်ယူကြရမည်။ အချို့သောပုံရိပ်များသည် ကလေးများအတွက် အလွန်ပြင်းထန်နိုင်သောကြောင့် ဤသင်ခန်းစာအတွက် သမ္မာကျမ်းစာဇာတ်လမ်းဗီဒီယိုကို ကြိုတင်ကြည့်ရှုထားပါ။ အကျဉ်းချုပ်မှာတော့ ပြင်းထန်မှုနည်းမည်။ သမ္မာကျမ်းစာနောက်ခံဇာတ်ကြောင်းနှင့် နိမိတ်ပြလမ်းညွှန်ဗီဒီယိုများကိုလည်း ကြိုတင်ကြည့်ရှုပါ။
သင်ခန်းစာ(၁) - ခရစ်တော်၌ လွတ်မြောက်ခြင်း။
အဓိကအချက် - ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အား လမ်းပြပြီး ခွန်အားပေးသည်။
ရွှေကျမ်းချက် - သို့ဖြစ်၍ ငါတို့သည်ဝိညာဉ်ပကတိကြောင့် အသက်ရှင်လျှင်၊ ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ကြကုန်အံ့။ ဂလာတိ ၅:၂၅ (JBMLE)
သင်ခန်းစာ (၂) ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်စရာများ
အဓိကအချက် - ကျွန်ုပ်သည် ‌ရောင့်ရဲကျေနပ်ပြီး ချီးမွမ်းမည်။
ရွှေကျမ်းချက် - အ​ရာ​ရာ၌ ကျေး​ဇူး​တော်​ကို ချီး​မွမ်း​ကြ​လော့။ အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ သင်​တို့​သည် ထို​သို့​ကျင့်​စေ​ခြင်း​ငှာ၊ ယေ​ရှု​ခ​ရစ်၌ ဘု​ရား​သ​ခင်​အ​လို​တော်​ရှိ၏။ ၁ သက် ၅:၁၈ (JBMLE)
သင်ခန်းစာ (၃) ယုံကြည်လိုက်ပါ
အဓိကအချက် - သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရမည်။
ရွှေကျမ်းချက် - ထို​သူ​တို့​က​လည်း၊ သ​ခင်​ယေ​ရှု​ခ​ရစ်​ကို ယုံ​ကြည်​လော့။ ယုံ​ကြည်​လျှင် သင်​နှင့် သင်၏​အိမ်​သူ​အိမ်​သား​တို့​သည် ကယ်​တင်​ခြင်း​သို့ ရောက်​ကြ​လိမ့်​မည်​ဟု ပြော​ဆို​လျက်၊ တမန်တော် ၁၆:၃၁ (JBMLE)